Egwuregwu egwuregwu 9 kacha mma maka gam akporo | Gam akporosis
Anyị maara na ndị na-eto eto na-enwekarị mgbe ụfọdụ na-abanye n'ọrụ nne na nna ha. Ya mere, otu n’ime ihe ndị kacha adọrọ mmasị ha bụ nke lekọta ụmụ ọhụrụMana, ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịme ya na ndụ n'ezie maka ebumnuche doro anya, ime ya site na egwuregwu, kama ịbụ ihe mmụta, nwere ike bụrụ ntụrụndụ na ntụrụndụ.
Ọ bụ otu ihe ahụ mere anyị ji ewetara gị akwụkwọ ozi a, ebe ị ga-ahụ ya Egwuregwu ụmụaka 9 kachasị mma nke dị ugbu a na Playlọ Ahịa gam akporo gam akporo. Ebumnuche ha bu umu nwoke na umuaka, dika ha di na umuaka, ma ndi mmadu nwere ike igwu ha, o kwesiri ka a mara, ma obu igbu mmadu ma obu ihe ozo.
Ọzọ ị ga-ahụ egwuregwu 9 kacha mma ụmụaka lebara anya maka gam akporo. All nwere aha ọma, ọtụtụ downloads, na nnọọ mma Fim. Na mgbakwunye, ha bụ n'efu.
1 Onye na-elekọta ụmụaka nwa ọhụrụ
2 Daybọchị nke 1 babysitter Mania - Baby Care Madness
3 My Baby elekọta
4 My Baby Food - Isi nri Egwuregwu
5 Baby Care & Uwe Egwuregwu Egwuregwu
6 Nlekọta ụmụaka: egwuregwu ụmụaka
7 Nwa ohuru 2 - ejima!
8 Baby bella na-elekọta
9 Mụaka Dọkịta
Onye na-elekọta ụmụaka nwa ọhụrụ
Anyị na-amalite ndepụta a na egwuregwu na-atọ ụtọ, nke nwa gị ga-amụta ụfọdụ ụzọ iji bụrụ ezigbo onye na-elekọta ụmụaka. Ma ọ bụ na Nanny na-elekọta ụmụ ọhụrụ na-abịa na agụmakwụkwọ dị ike maka ya, yabụ site na aha a ị nwere ike nweta echiche ndị bụ isi nke otu esi emeso nwa ọhụrụ ma nye ya nlekọta dị mkpa ọ chọrọ.
Saa nwatakiri ahụ, nye ya nri, hichaa ezé ya, nye ya mmiri, gbanwee akwa ya, hichaa ọnụ ya mgbe ọ ruru unyi, lekọta ya mgbe ọ na-arịa ọrịa ịgwọ ọrịa, mee ka ọ hie ụra n’ime ụlọ ndina ya iji zuo ike, nye ya ihe kachasị mma na uwe na-egwuri egwu ma soro ya gwuo egwu ka ọ ghara ịkwa ákwá ma nwee obi ụtọ, yana nlekọta nke ọma. Egwuregwu a ị ga - amụta etu ị ga - esi bụrụ ezigbo nne ma ọ bụ nna.
Developer: BATOKI - Ngwa maka umuaka na umuaka
Daybọchị nke 1 babysitter Mania - Baby Care Madness
Bụ onye na-elekọta ụlọ abụghị ọrụ dị mfe, yana egwuregwu a ị ga-ahụ maka onwe gị. Nwa na-elekọta Mania 1st Day bụ egwuregwu nke ị ga-eche dị ka onye na-elekọta nwa zuru ezu.
Mụ ọhụrụ amụrụ ọhụrụ na-esikarị ike ilekọta na ilekọta, maka ịbụ onye a na-atụghị anya ya ma dị oke nhọrọ. Gbalịa mee ka uche gị dị ọcha, ka ị na-enye nlebara anya niile ụmụ ọhụrụ kwesịrị ịdị jụụ, rie nri nke ọma, debe ha ọcha ma dịkwa ọcha.
Ga - ahụ onwe gị tupu ụmụ ejima abụọ, nke ọ bụla nwere agwa na omume dị iche iche ị ga - amụta ịnagide, mana echegbula. Are bụ onye nlekota nwa kacha mma na njedebe nke ụbọchị ị nwere ike igosi ya na egwuregwu a.
Soro umuaka a gwuo egwu ma kuziere ha ka ha si eme obi uto na nka. Gosiputa ha na usoro nri ndi ozo site na isi nri ndi n’emere kuki, achicha, nri uto na nkpuru obi ndi ozo. Tụfuo oriri na ọ themụ forụ maka ha ma jiri ejiji mara mma, mana ọ bụghị naanị nke ahụ. Were ha pụọ ​​maka ịgagharị ma kpụrụ ha gaa n’akụkụ osimiri iji mee ụlọ ájá, see foto ma nye ha mmiri ịsa ahụ, nke ha hụrụ n’anya nke ukwuu.
My Baby elekọta
Na egwuregwu a, karịa ịbụ a babysitter ma ọ bụ a Nanny, ị ga-emezu ọrụ nke na-elekọta ụlọ na njikwa nke nọọsụ na i nwere. N'ebe ahụ, ị ​​ga-enwe ọtụtụ ụmụaka n'aka gị na nnukwu ọrụ dịịrị ha, mana nke ahụ anaghị atụ gị ụjọ. Ga-ekpori ndụ. Themụaka na ụmụ ọhụrụ ị ga-ahụ ebe ahụ na-erube isi.
E nwere ihe ngosi 7 ebe ị ga-elekọta ụmụ ọhụrụ. Enwere mgbanwe akwa, akwa ejiji, ịsa ezé ezé, nri dị ụtọ, ụra izu ike, egwuregwu obi ọkụ, na ịsa ahụ ọchị. Na nke ọ bụla n'ime ha, ị ga-elebara ha anya ka ha wee nwee anụrị, rie, hie ụra na ọtụtụ, iji wee lebara ha anya nke ọma ka ndị mụrụ ha nwee obi ụtọ n'ọrụ ha.
Ihe ruru umuaka ise, onye obula nwere agwa di iche iche na-adighi nma. Ga-agarịrị ha niile na, ebe ọ bụ na e nwere akwa uwe, ị ga-eyi ha uwe na-adịghị mma; okike ebe a enweghi ike. Enwekwara ọtụtụ minigames ị nwere ike igwu na nke ọ bụla na ọtụtụ ụdịdị ị ga - achọpụta gafere oge mgbe ị na - enwe mmetụta dịka onye na - elekọta ụmụaka ma ọ bụ nọọsụ nọọsụ.
Developer: FM nke Bubadu
My Baby Food - Isi nri Egwuregwu
Egwuregwu a nke ilekọta ụmụ ọhụrụ dịtụ ka nke ndị a kọwarala, n'ihi na Ọ bụghị naanị otu nke ị ga-elekọta nwa na-elekọta, mana debe ya ma, n'otu oge ahụ, sie nri na-atọ ụtọ ma sie ezigbo nri maka ha.
Nwere ike iji nri ụmụaka m sie nri na ihe ọ drinksụ drinksụ na-atọ ụtọ. Sie nri siri ike nke nwere ọtụtụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, ofe, wee were oroma, cherị, piich, piom, ube, ma ọ bụ apụl apụl, mee smoothies.
Enwekwara ime ụlọ mmekọrịta ebe ị nwere ike ilekọta ụmụ ọhụrụ, yana ọtụtụ obere egwuregwu ị nwere ike igwu egwu ka ha wee ghara ịgwụ ike, opekata mpe gị niile! Na mgbakwunye, dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ị nwere ike ịkọpụta akwụkwọ nri gị nke mere na ọ dị ọhụrụ ma enweghị kemịkal, n'otu oge ị ga - alụso ikpuru ọgụ ka ọ ghara imebi owuwe ihe ubi gị. Kụtuo mkpụrụ osisi ndị toro ogologo iji bulie ha ma kwadebe ha.
Ọ bụ egwuregwu na-atọ ụtọ nke ụmụ gị ga-eriju afọ.
Baby Care & Uwe Egwuregwu Egwuregwu
Bụrụ onye na-elekọta nwa zuru ezu na egwuregwu gam akporo a ma ama. N'otu oge ahụ ị na-elekọta nwa gị ma nye ya nlebara anya niile ọ chọrọ, dozie ya n'ụzọ nke gị ka ọ wee maa mma ma dị ọhụrụ, nwee ọtụtụ uwe, uwe, uwe, ntutu isi, uwe na ngwa ga-abụ nye ya ihe nlere n'anya.
Soro nwa gị gwuo egwu ma mee ka ọ banye mgbakọ mmekọrịta oge egwuregwu, ma mee ka o hie ụra ka o nwee ike izu ike ma nwetaghachi ume. Mee ka ị bụ nne ya ma lekọta ya nke ọma nke ukwuu, ka ọ ghara ịkwa ákwá ma nwee ahụ iru ala. O nwekwara ọtụtụ ihe ụmụaka ji egwuri egwu n'aka iji mee ka uche ya pụọ ​​ma nwee ọ likeụ dịka enweghị echi.
Kwesịrị inye nwa gị nri na-edozi ahụ oge niile, yana mkpụrụ osisi, mkpụrụ osisi, karama na akwụkwọ nri, na ọmarịcha, yana ịsa ahụ na-edozi nke ị kwesịrị iji na-eme ịdị ọcha.
Nlekọta ụmụaka: egwuregwu ụmụaka
Nke a bụ egwuregwu ọzọ dị egwu maka ụmụaka ebe ị ga-elekọta nwa gị ka e wee nye ya nri nke ọma. Ma, ọ bụghị naanị nke ahụ ka a ga-eme; Enwere ọtụtụ egwuregwu ụmụaka ị ga - egwu, yabụ na gị na nwa gị ga - ekpori ndụ.
Were ya saa ahụ ma nye ya nri mgbe nwa ọhụrụ gwara gị ka ọ toaa. O nwere ike ọ gaghị adị mfe ... ị maara etu ụmụntakịrị dị, mana nke ahụ anaghị ewetara gị nnukwu nsogbu. Nwere ike ịbụ nnukwu nne ma ọ bụ nna ahụ nke chọrọ ka nwa ahụ nwee nchekwa ma lekọta ya nke ọma. Nye ya anya niile ọ chọrọ ma nwee obi ụtọ na egwuregwu egwuregwu ụmụaka a ma ama maka gam akporo.
nwa na-elekọta: egwuregwu ụmụaka
Nwa ohuru 2 - ejima!
Claire, Penny na Allison bụ ndị nne atọ na-akwado ịnabata ụmụ ọhụrụ ha. Ga-amụ ụmụ ejima abụọ ị ga-elekọtaMgbe gị na ha na-egwuri egwu, ị na-enye ha nri ma na-enye ha ọcha dị mkpa ka ha hie obere ụra oge ụfọdụ wee nwee ahụ ike.
Ghaghi iyi akwa umuaka, ma maka nke a ị nwere ike ikwe ka uche gị fee ma mepụta ihe, nwee ọtụtụ uwe, uwe, uwe, ngwa na ihe ndị ọzọ; ihe niile dị na mkpịsị aka gị. Guzo dị ka nwa sitter ma nwee anụrị mgbe ị na-egwu egwuregwu a ewu ewu dị na Playlọ Ahịa gam akporo gam akporo.
Mana ikwesighi ighota nani umu aka, kamakwa banyere nne ha. Were ọbara mgbali elu ha, nye ha vitamin nri, ma nyere ha aka ịnagide afọ ime ha.
Developer: Akwụkwọ PlayTales
Baby bella na-elekọta
Baby Bella Caring bụ egwuregwu ọzọ na-elekọta nwa nke ị ga-anwale ugbu a. Ọ nwere ihe karịrị otu nde nbudata na Playlọ Ahịa gam akporo gam akporo na ọkwa ndị kachasị dị mma.
Egwuregwu a ị nwere ike ịdị ka onye na-elekọta ụmụaka na, gịnị kpatara ya, ọ bụ nne dum. Were nwa gi lekọta ya dika o kwesiri. Na-enye ya nri ka ọ ghara ịkwa ákwá na agụụ, nye ya mmiri ka ọ ghara ịdị ọcha ma na-esi ísì ụtọ, soro ya na ndị ọzọ na-egwuri egwu, mgbe niile na-amụta nlekọta dị mkpa ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-agwọ nwa ma nwee ya n'okpuru gị ibu ọrụ.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-achọ egwuregwu dị iche na ndị niile anyị gosipụtara, ụmụ dọkịta (ụmụaka dọkịta) bụ otu maka gị, n'ihi na Na egwuregwu a, ịnweghị ọrụ nke onye na-elekọta ụmụaka ma ọ bụ onye na-elekọta gị nke ị ga-arụ na ndị ọzọ, kama nke dọkịta.
N'ebe a, ị ga-emerịrị ọrụ dọkịta ma gwọọ ndị ọrịa niile nọ n'afọ iri na ụma bịara n'ụlọ ọgwụ gị, n'ihi na ha niile na-arịa ọrịa! Na-elekọta ha, na-achọpụta ha, na-enyocha ha ma na-enye ha ọgwụgwọ kwekọrọ na nke ọ bụla; chekwaa ụbọchị na egwuregwu a ma bụrụ dọkịta kacha mma ị nwere ike ịbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Egwuregwu ụmụaka 9 kachasị mma maka gam akporo